Bit By Bit - Mustaqbalka - 7.2.2 xog ururinta Xubin xuddun
Habab lagu ururiyo xogta ee la soo dhaafay, kuwaas oo ah cilmi-xuddun, ma doonayo in sidoo shaqeeyaan da'da digital. In mustaqbalka, waxaan qaadi doonaa hab ka qaybgale-xuddun u ah.
Haddii aad rabto inaad xog ururiso da'da digital, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid inaad ku tartamayso waqtiga dadka iyo dareenka. Waqtiga iyo dareenka kaqeybgaleyaashaba aad ayay muhiim u yihiin; waa alaabta ceeriin ee cilmi-baaristaada. Dad badan oo cilmi-bulsheed ah ayaa caadeystey in ay samaystaan ​​cilmi-baaris loogu talagalay dadyowga xagjirka ah, sida kuwa shahaadooyinka ku jira shaybaarada xerada. Xaaladahaan, baahiyaha cilmi-baaristu waxay ku badan yihiin, iyo ka-qaybgalayaashu ma aha mudnaan sare. Daraasaddan cilmibaarista dijitaalka ah, habkani ma aha mid sii waaraya. Ka qaybqaatayaasha badanaaba jir ahaanba way ka fog yihiin cilmi-baarayaasha, iyo isdhexgalka labada u dhaxeeya ayaa badanaa dhexdhexaadinaya kombuyuutar. Tani waxay ka dhigan tahay in cilmi-baarayaashu ay ku tartamayaan ka-qaybgalayaasha dareenka waana sidaas darteed waa inay abuuraan waayo-aragnimo ka-qaybgalayaasha xiiso badan. Taasi waa sababta cutub kasta oo ku lug leh dhexgalka kaqaybgalayaasha, waxaanu tusinay tusaalooyin daraasado ah oo qaatay qaabka kaqeybgalayaasha ee ururinta xogta.
Tusaale ahaan, cutubka 3aad, waxaynu aragnay sida Sharad Goel, Winter Mason, iyo Duncan Watts (2010) sameeyeen ciyaar la yiraahdo Friendsense oo dhab ahaantii ahaa qaab xariif ah oo ku saabsan sahan habboon. Cutubka 4aad, waxaan ku aragnaa sida aad u abuuri kartid xogta qiimaha leh eber qiimaha adoo dejinaya tijaabooyin ay dadku rabaan in ay ku jiraan, sida tijaabinta muusigga muusigga ah ee aan abuuray Peter Dodds iyo Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ugu dambeyntii, cutubka 5, waxaan aragnay sida habka Kevin Schawinski, Chris Lintott iyo kooxda Galaxy Zoo ay samaysay wada shaqeyn ballaaran oo dhiirigelisay in ka badan 100,000 oo qof inay ka qaybgalaan astaanta (labadaba ereyga ereyga) muuqaalka sawirka (Lintott et al. 2011) . Mid kasta oo ka mid ah kiisaskan, cilmi baarayaashu waxay diirada saarayeen sidii loo abuuri lahaa waayo-aragnimo wanaagsan oo ka-qaybgalayaasha ah, iyo kiis kasta, qaabkan ka-qaybgalayaasha ah wuxuu u suurtageliyay noocyada cilmi-baarista cusub.
Waxaan rajeynayaa in mustaqbalka, cilmi baarayaashu ay sii wadi doonaan in ay horumariyaan hababka ururinta xogta oo ku dadaalaysa inay abuuraan khibrad user wanaagsan. Xasuuso in da'da dijitaalka ah, ka qaybgalayaashaadu waa hal guji oo ka fog fiidiyowga eyga skateboarding.